Ulo akwukwo nke ndi African Music (AMI), ulo akwukwo a ma ama ama mepere uzo ya na Gabon - AFRIKHEPRI
Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọkụ nke Africa (AMI), ụlọ akwụkwọ egwu mara mma meghere ibo ụzọ na Gabon
A na-ewu ụlọ akwụkwọ egwu egwu na Libreville, isi obodo Gabon.
The African Music Institute (AMI), na ụzọ nke Government of Gabon, bụ akụkụ nke mba netwọk nke Berklee College of Music na Boston, Massachusetts na United States, otu n'ime ndị kasị prestigious onwe music ụlọ akwụkwọ ọzọ 270 Grammies ndị a na-agụnye na ụmụ akwụkwọ ya.
N'ịbụ ndị na-akwalite ụlọ akwụkwọ dịka hectare isii dị n'ime Libreville, ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ ga-enye ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ dị iche iche gụnyere ụlọ ntanetị, ụlọ ọrụ telivishọn, Ụlọ Nzukọ ihe ngosi na ihe ndị ọzọ. Enwekwa ebe obibi Campus.
AMI, nke ga-emeghe ibo ya na September 2017, na-emetụta ụmụ akwụkwọ si na kọntinent ahụ ma nye Berklee ọmụmụ na Bekee na French. Ndebanye aha ga-amalite na Jenụwarị nke n'afọ ọzọ.
Ụlọ akwụkwọ ahụ ga-enwe ike ịnabata ma ọ dịkarịa ala ụmụ akwụkwọ 140 kwa afọ (80% maka ikikere na 20% maka ogo mmụta na music na ọzụzụ zuru ezu). Ụmụ akwụkwọ ga-enwe ike ịmepụta ihe dịgasị iche iche gụnyere ịgụ egwú, ihe nkiri egwu egwu, mmepụta egwu egwu na nkà na ụzụ dị mma, mmepụta kọmputa na imewe, ịrụ ọrụ na ịgba egwú.
Na 2018, AMI ga-enye ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ, gụnyere usoro ihe ọmụmụ nke 7 na mba ọzọ na usoro 5 izu na arụmọrụ egwu.
Ọmụmụ ihe ọzụzụ n'efu na September
Site na 26 ruo 30 Septemba 2016, Ụlọ Akwụkwọ Music nke Berklee, na mmekọrịta nke AMI na Gọọmenti Gabon, ga-enye mgbako n'efu na-elekwasị anya na arụmọrụ egwu nke oge a. Nzuko a ga-eme na Libreville ma na-emeghe ndị na-egwu egwú sitere na kọntinent na-ekwu okwu na ụdị egwu ọ bụla.
Ndị na-ahazi na-achọ ụmụ akwụkwọ 180, ndị ọkachamara Berklee ga-azụlite. A ga-edebe ogbako ahụ na Bekee na French. Iji sonye, ​​ụmụ akwụkwọ ga-abụ 18 bụ 30 dị afọ iri na ụma, ha aghaghị igwu egwu ma ọ bụ omume ọbụla ọnwa isii.
Iji tinye akwụkwọ, biko mezue ma debe ya ụdị ntanetị.
Oge njedebe bụ Saturday 10 September 2016.
A na-agba ndị nile na-enyocha akwụkwọ ume ka ha nyefee akwụkwọ nkwado (dịka njikọ nke ihe ntaneti ma ọ bụ vidiyo) na-egosipụta ahụmahụ na nkà ha.
Ndị na-eso ha ga-abanye ma nye ha n'efu, ma ha ga-ekpuchi mmefu njem ha niile. Ndị ga-enweta akwụkwọ mgbe ha gachara ọzụzụ ahụ.
Maka ama ndị ọzọ, gaa leta website nke Institute of Music Africa.
Hippo Water Roller iji nyere ndị ime obodo mmiri